Kobo Libra H2O, oo ah dhammaan qaybaha eReaders ee aad ku aqrin doontid meel kasta oo aad tagtid | Wararka Gadget
Kobo Libra H2O, oo ah dhammaan qaybaha eReaders ee aad ku aqrin doontid meel kasta oo aad tagtid
Kariim Hmeidan | | Akhristayaasha
Aan u noqono sano 2006, sanadkii ay sameeyeen muuqaalka kore ee eReaders, aaladahaas aan awoodno ku akhri kumanaan iyo kumaan kun oo buugaag ah meelkasta adigoo wata aalad keliya. Waana in dharbaaxo farsamo ay lagama maarmaan u ahayd adduunka wax akhriska ka dib markii aan aragnay isla isbeddelka ku yimid suuqyada muusikada iyo fiidiyowga aaladaha noo oggolaaday inaan isticmaalno waxyaabaha dijitaalka ah. Sony wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee ku booda boodhka, laakiin waxaan si dhakhso leh u bilownay inaan aragno sida dhammaan noocyadu ay ula socdaan.
Khadka elektarooniga ah ayaa halkaan ku sii nagaan lahaa, khad noo ogolaaday inaan wax aqrinno iyadoo aan indhaha laga daalin indhahana u oggolaanaya aaladaha is-maamul weyn. Oo si sax ah maanta waxaan dooneynaa inaan kuu keeno Kobo cusub, cusub Kobo Libra H2O eReader. Qalab cusub oo ka socda maktabadda Rakuten-ka Japan oo leh Waan akhrin karnaa meel kasta oo aan tagno annaga oo aan ka baqaynin in qalabku uu qoyo. Waan isku daynay waana kuu sheegeynaa inay aad ugu qalanto. Boodka ka dib waxaan ku siinaynaa dhammaan faahfaahinta ...
1 Kobo Libra H2O, eReader-ka biyuhu soo celiyaan ee soo celiya badhamada jirka
2 Ku dhex dhaqaaq buugga adigoon lumin dunta guud
3 Cadaan, midab casri ah eReaders
4 Buugaag ama maqaallada aad ugu jeceshahay mahadsanid Jeebka
5 Kobo, maktabadda maktabadda ee ka timid adduunka jir ahaaneed
6 Iibso Kobo Libra H2O cusub
Kobo Libra H2O, eReader-ka biyuhu soo celiyaan ee soo celiya badhamada jirka
Kobo Libra H2O wuxuu leeyahay a kaydinta ilaa 6000 buug, dhammaantood waxay kuxirantahay cabirka kuwan, in kabadan awooda kufilan iyadoo la tixgelinayo daraasado xaqiijinaya in celcelis ahaan aan awoodno aqri nolosheena celcelis ahaan inta udhaxeysa 2000 ilaa 4000 buug nolosheena oo dhan.
Ragga Kobo jooga waxay u baahdeen inay kordhiyaan shaashadda Kobo Aura H2O, waana leeyihiin. Kobo Libra H2O wuxuu la yimaadaa a 7 inch screen, shaashad dhammaystiran oo lagu akhriyo dhammaan eBooks-ka aan rabno. Oo sidaan kuu sheegayno waa roob roobaadka. Waayahay, muhiim maahan inaad barkad gasho si aad wax u aqriso, laakiin runtu waxay tahay in ka hortagga biyaha ay aad u xiiseynayaan jawiga uu qalabku ku qoyn karo. Waxaan ka fikiri karaa daqiiqado markaan banaanka wax ku aqrino oo dhibcaha dhibcaha qaar ay bilaabaan inay soo dhacaan, ama haddii aan ku suganahay hareeraha barkadda ama xeebta.
Naqshadeynta ayaa isbedeleysa marka loo eego Kobo Aura H2O, waxayna keeneysaa a naqshadeynta oo aad ugu eg Kobo Forma, shirkadda hogaamisa eReader. In kasta oo ay run tahay in aysan lahayn naqshad bilaa qaab ah, Kobo Libra H2O, ayaa keenta isla badhamada jirka ah ee Kobo Forma ayaa noo oggolaan doona inaan bogga rogno, ama dib ugu noqo tii hore, qaab ka fudud taabashada shaashada taabashada (anti-milicsiga iyo xalka 300 PPI) ee qalabka. Tani waa wax aan aad u jeclaa tan iyo markii aan isku dayey eReaders kale inay ahayd wax aan u xiisay sababo la xiriira sida xasaasiga u ah shaashadaha taabashada. Shaashad jidka ag fadhida ayaa leh iftiinka hore ee la hagaajin karo oo xitaa qaadaya sepia tone si indhaheena aysan ugu daalin jawiga iftiinka yar.
Ku dhex dhaqaaq buugga adigoon lumin dunta guud
La Qalabka UX, softiweerka ay ku socoto, wuu hagaagsan yahay, bilaa wanaag waa runtaa inaad markasta horumar samayn karto. U guuritaanka qalabka shaashadda ayaa wareegeysa, wax aad u xiiso badan inkastoo Kobo wuxuu u baahan yahay inuu cadeeyo jawaabta ay xoogaa siineyso. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda isdhexgalka menus, si fiican ayey u shaqeysaa laakiin waxaan u maleynayaa in cusbooneysiinta qalabka firmware ay sii fiicnaan doonto.
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee tan Kobo Libra H2O waa hab cusub oo loo maro marinka dhexgalka akhriska. Waxa jira buugaag aan lahayn bilow iyo dhammaad, ama taas beddelkeeda kuu oggolaanaysa inaad wax ka beddesho amarka akhriska maxaa yeelay la-tashiga bogaggii hore ama kuwa soo socda ayaa fiicnaan kara. Tan awgeed, Kobo Libra H2O wuxuu ina tusayaa jadwal aan ku dhex mari karno buugga, waxaan ka dhigi karnaa ilaa 3 boodbood oo buugga ah ka dibna ku laabo barta aan joogno. Wax aad u faa'iido badan buugaagta qaarkood oo aan runtii jeclaa.
Cadaan, midab casri ah eReaders
Cusub Kobo Libra H2O waxaan ku heli karnaa madow iyo cadaan, midab naloo sheegay ayaa laga soo badbaadiyay moodelladii hore dalab caan ah. Waana in wax walbaa aysan aheyn inay noqdaan madow ... Midab qalab oo aan ku dari karno afar ikhtiyaar oo kala ah Daboolida, ama daboolida qalabka ee madow, cawl, casaan, iyo buluug aqua ah (midab ku habboon Kobo Libra H2O cad).
Buugaag ama maqaallada aad ugu jeceshahay mahadsanid Jeebka
Waxaan jecel nahay inaan wax aqrino, laakiin kaliya ma ahan buugaagta… Waxaan ku nool nahay dunida isticmaalka, waxaana jira aad iyo aad u sii kordheysa baloogyo ama warbaahin aan aqrino nolol maalmeedkeena iyo Kobo Libra H2O waa aaladda ugu fiican ee lagu cuni karo noocyadan.
Waad ku mahadsan tahay is dhexgalka jeebka, waxaynu u baahan doonaa oo keliya inaynu kaydinno maqaal kasta oo aan ku aragno kombuyuutarkeenna ama aaladda gacanta ee adeegga liistada akhriska caanka ah, ka dibna si toos ah ayaa loogala soo bixi doonaa Kobo Libra H2O waxaanu arki doonaa nooc ka fudud oo maqaalka oo aan lahayn xayeysiis na dhib. Waxaas oo dhami waxay ku jiraan faa'iidooyinka akhriska ee eReader na siinayo.
Kobo, maktabadda maktabadda ee ka timid adduunka jir ahaaneed
Sida magaceedaba ka muuqata, Kobo Libra H2O wuxuu ka yimid qoyska Kobo, oo ah buugaagta buugaagta ee internetka laga helo oo asal ahaan ka soo jeeda buugaagta buugaagta jirka ee Canadian yaa ogaa sida loo sameeyo ku-meel-gaadhka adduunka casriga ah. Ilaa iyo 6000 buug iyo buugaag maqal ah waa waxa aan ka heli karno dukaanka Kobo, tirooyinka aad u tartamaya adigoon ogeyn waxa tartamayaashaada ugu weyni haystaan ​​maadaama aysan xog ka bixinaynin tirada buugaagta ay hayaan.
Waxyaabaha aan aadka ugu jeclaa Kobo waa taas waxay fursad u siinayaan qorayaasha cusub, ama aan ahayn wax cusub, inay is-daabacaan eBuugaag kuu gaar ah adigoon soo marin madbacad. Naqshad ganacsi oo cusub oo fududaynaysa oo fududaynaysa sheegidda sheekooyinka iyo iyaga oo la ogeysiiyo.
Iibso Kobo Libra H2O cusub
Waxaad awoodi kartaa hel kan cusub ee Kobo Libra H2o iyada oo loo marayo tafaariiqda weyn ee Rakuten Kobo oo Isbaanish ah, Fnac, ama bogga Kobo. Maanta waxaa la galiyay qiimo ahaan 179,99 euros, waa qiime haddii aan isbarbar dhigno dhiggiisa (oo si isku mid ah u leh astaamo isku mid ah) shirkadda weyn ee iibka tooska ah, ee loo yaqaan 'Amazon Kindle Oasis', waa mid aad u tartan badan maadaama ay ka hooseyso 70 euro.
Marka hadda waad ogtahay, ma ku talinaynaa? haa. Ma qalab wanaagsan baa in la akhriyi karo buugaagta aan jecel nahay meel kasta oo aan aadno? haa. Haddii aad raadineyso eReader aad wax ku aqrisan karto barkadda, xeebta, sariirta, ama maqaaxi, Koko Libra H2O waa eReader kuugu habboon.
Daboolida kahortaga kuma jiraan qiimaha
Balaastikku wuu ku dhici karaa dhicitaan suuragal ah
Software-ka waa la horumarin kari lahaa
Biyo-ma-lihi oo la quusin karo
Badhamada jirka ayaa dib ugu soo laabtay suuqa taabashada eReader
Qaab-socodka cusub ee ku-xirnaanta akhriska
Kobo Miisaanka H2O
Dib u eegida: Kariim Hmeidan
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Akhristayaasha » Kobo Libra H2O, oo ah dhammaan qaybaha eReaders ee aad ku aqrin doontid meel kasta oo aad tagtid
Acer wuxuu soo bandhigayaa noocyadiisa cusub ee buugaagta xusuus-qorka ee Chromebook ee IFA 2019
Sida looga soo saaro sawirrada fiidiyowyada YouTube-ka